ONYE MMEPỤTA ONWE ONYE BỤ TOBY FOX WEPỤTARA ISI NKE MBỤ NKE EGWUREGWU N'OKPURU AKWỤKWỌ ỌRỤ DELTARUNE - AKỤKỌ - 2019
Na-akpọ ndị na-egwu egwuregwu ka ha soro na nnyocha ahụ.
Ụbọchị ọzọ na akaụntụ Twitter nke egwuregwu Undertale, tọhapụrụ afọ atọ gara aga site na onye mmepụta nke Toby Fox, njikọ dị na deltarune.com, bụ ebe a na-akpọ ndị ọbịa ka ha budata otu onye nchịkọta na isiokwu SURVEY_PROGRAM ("Poll Program").
Mgbe ị wụnye usoro a, onye ọrụ ahụ na-aga site na ntakịrị nnyocha, ma ọ ga - enwe ohere ịgafe isi nke mbụ nke egwuregwu ọhụrụ, nke a na - akpọ Deltarune - ihe anagram maka Undertale, nke egwuregwu a na - egosi na ọ bụ prequel.
Ndị nbudatara Deltarune hụrụ ebe dị na uninstaller: yana faịlụ egwuregwu, faịlụ ndị ọzọ na folda ahụ dị ka onye na-ewepughị ya na-ehichapụ. Toby Fox n'onwe ya kwetara na nsogbu a dị adị ma gwa ya ka ọ ghara iji mmemme mwepụ ahụ.
Enweghi ozi ndi ozo banyere Deltarune ma ozoghi teaser a (ma obu, onye nwere ike ikwu, ochichi).